Iipropathi zeAloe Vera kulusu lwamadoda | Amadoda aQinisekileyo
Maxesha amaninzi sivile kwintengiso yezithambiso eziqulathiweyo Ialoe vera kwaye icacisiwe njengenzuzo. Kodwa kufanelekile ukuzibuza ukuba ingaba lo ngumcimbi nje wentengiso okanye ukuba ngenene esi sityalo ineempawu eziluncedo kwimpilo yethu.
Okokuqala kufuneka kuthiwe isityalo se-Aloe Vera ngowaseAfrika y ineempawu ezininzi, phakathi kwazo ezimeleyo: ukuthambisa, ukuphilisa kunye nokuchasana nokudumba. Isetyenziselwa ukususa amanqatha kulusu kwaye inamandla okuzihlaziya kwakhona.
photo mboleko: king_david_uk
Ngaphandle kokuzisa zonke izibonelelo emzimbeni wethu, iinkampani ezininzi zokuthambisa abayisebenzisi kakuhle. Abanye bayikhankanya kwifayile ye- ileyibhile yemveliso yakho, iwonga nje, kwaye abanye bayazisebenzisa imali encinci engaqinisekisi ukuba ivelisa isiphumo esifunekayo.
Nangona kunjalo, zikhona iindlela zokwazi ukuba imveliso yezithambiso inobungakanani kunye nomgangatho weAloe Vera efunwa ngumzimba wethu: enye yeendlela kukujonga ukuba inayo Ibheji ye-IASC. Enye indlela yokuqinisekisa kukubona ukuba imveliso ivela kulimo lwezinto eziphilayo.
photo mboleko: IINKCUKACHA2®
Into ebalulekileyo kukuba ubone, xa uthenga imveliso kukuba ine Iipesenti ezingama-99 zeAloe Vera kwaye ayiqulathanga izongezo ezinje ngesiqholo okanye utywala. Kungenxa yokuba indibaniselwano inokusicaphukisa ulusu kunye ne-Aloe Vera ayinakwenza njengoko besinokufuna emzimbeni wethu.
Ngamafutshane, iimveliso zezithambiso eziqukethe iAloe Vera ziluncedo kakhulu, kodwa kufuneka ithathelwe ingqalelo leyo ntengiso okanye ukunyuswa okunikwa kwezi mveliso akusoloko kuchanekile, ngakumbi xa zincinci kakhulu kwesi sityalo. Ulwazi oluthe kratya kwi Ubudenge
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iipropathi zeAloe Vera kulusu lwendoda
Uhlobo lwentaliyane ukhuphiswano olomeleleyo olusuka kwisitayile saseFrance
Funda malunga neenqanawa kwisitayile!